सार्वजनिक स्थलमै पशुपति शर्माले कोमल वली माथी किन यस्तो शब्द प्रयोग गरे ? हेर्नुहोस् भिडियो - pnpkhabar.com
You are at:Home»भिडियो»सार्वजनिक स्थलमै पशुपति शर्माले कोमल वली माथी किन यस्तो शब्द प्रयोग गरे ? हेर्नुहोस् भिडियो
सार्वजनिक स्थलमै पशुपति शर्माले कोमल वली माथी किन यस्तो शब्द प्रयोग गरे ? हेर्नुहोस् भिडियो
By शर्मिला गुरुङ on १५ माघ २०७४, सोमबार ०७:२६ भिडियो
काठमाडौँ, १५ माघ : सानो छदाँ रेडियो नेपालमा कोमल वलीको समाचार सुनेका गायक पशुपति शर्माको हाल ६ बर्षकी छोरी समेत छिन् । तर पनि कोमल वलीको बिहे भएको छैन । पोखराको एक महोत्सवमा कोमलवलीको उछित्तो काड्दै पशुपति शर्माले मञ्च बाटै भने, कति पोईल जान पाम्, पाम् भन्छौं, पोईल गएर मर् सम्म भने ।
कोमल ओलीको लागी गत बर्ष आफैले गीत बनाईदिएको स्मरण गर्दै पशुपति शर्माले अब कोमल वलीको बिहे नहुने ठोकुवा समेत गरे । आखिर किन महोत्सवकै मञ्चबाट पशुपति शर्माले कोमल ओली यस्तो शब्दको प्रयोग गरे ? हेरौं यो भिडियोमा :